June 9, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Awoodda ciidan ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jirta waa Ciidanka Midowga Afrika ee ku howlgala magaca (AMISOM),kuwaas oo dhaqaalo iyo taageero farsamo ka hela Qaramada Midoobay.
Marar badan oo Waqtiga (Mandate-ka) ay Soomaaliya kaga howlgalaan Ciidanka AMISOM la kordhiyay hadana waxaa qorsheysan in mar uun ka baxaan Soomaaliya mas’uuliyadda amni ee dalkana ay ku wareejiyaan Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay iney ka maarmi doonto ciidanka AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya,kuwaasi oo Ciidanka Dowladda Federaalka ka gacan siiya dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo Daacish.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ( Amardanbe ) ayaa sheegay ciidanka somaliya inay kamaarmi doonaan garabka ay ka helaan ciidanka Amisom ee howlgalka nabad ilaalinta kawada somaliya.
Isagoo ka hadlayay tababar magaalada baydhabo looga furay ciidan ka tirsan dowlada somaliya ayuu wasiir (Amardanbe) u sheegay ciidaka inay dadaalaan si ay qayb uga noqdaan ciidanka la doonayo inay badalan ciidanka Amisom ee howgalka kawada somaliya.
Haddaba suurta gal ma tahay in xilligan la joogo ciidanka Soomaaliya la wareegaan amniga guud ee dalka C/rashiid Cali Warsame oo ku xeel dheer arrimaha amniga kuna sugan Muqdisho ayaa sheegay.